Best Coil Spring Matress | Rayson
I-raysonon eRaysonon Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko eyenziwe ngezifiso umjikelezo we-latex we-latex umkhiqizi waseThailand afrika
Ukucatshangelwa kwe-Design of Rayson Cover Izici ezilandelayo: ukuqina okuqinile nokushukumisayo, isivinini sokusebenza, ama-gearbox, ibhukwana, kanye nokulawula okuzenzakalelayo.
Ngamandla aqinile we-R & D kanye namandla okukhiqiza, amaRayson manje asephenduke umenzi wobungcweti kanye nomhlinzeki onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu kufaka phakathi umatilasi we-COIL Sprin omuhle kakhulu akhiqizwa ngokususelwa ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi oluqinile namazinga aphesheya. I-RaySon engcono kakhulu ye-Coil Spring Rayshinin iRayYays ingumkhiqizi obanzi nomhlinzeki wemikhiqizo esezingeni eliphakeme nenkonzo eyodwa. Sizokwenza, njengokuhlala sihlinzeka ngenkuthalo izinsizakalo ezisheshayo ezinjalo. Ngemininingwane engaphezulu mayelana ne-Mat Matress yethu engcono kakhulu ye-Coil Spring. Ukuhlolwa kwamakhemikhali, imibala, amandla ashubile, njll. Ezinye zezivivinyo ezijwayelekile ezenziwa kulo mkhiqizo nezinto zokwakha ezisetshenziswe kulo.
Kuze kube manje, iRayyson idlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha ihlinzekwa ukwakhiwa okusha, ikhwalithi eqinisekisiwe, kanye namanani ancintisanayo.
Ngemigqa ephelele yokukhiqiza kanye nabasebenzi abanolwazi, amaRayson angakwazi ukuzimela, athuthukise, akhiqize, futhi avivinye yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo.
Ungawuphulwa kanjani umatilasi osongwe?
I-1.Place Carton egumbini elingaphansi egumbini lakho lokulala, donsa ngokucophelela umatilasi bese ubeka embhedeni wakho. 2. Ukusika ngesikhwama sangaphandle ngesikhafu okwenza isiqiniseko sokuthi ukungasiki omubi wepulasitiki ngaphakathi noma umatilasi, ungamanga ummese. 3.-0ngiselela umatilasi ovalwe uphawu embhedeni wakho ebetheni 4. Sika ngesikhwama sepulasitiki kanye nokubuka umatilasi ngaso leso sikhathi uqala ukubola, susa isikhwama sepulasitiki. I-5.Allow amahora angama-24 kumatilasi akho amasha ukunwebeka ngokuphelele.